Iibhotile zoomatshini wokuLayibhela waseTshayina oRound Bottle umkhono wokuFaka iiLabheli kumatshini wokwenza umatshini kunye nabavelisi |TSIBA
Umatshini wokuLayibhila wokuLayibhisa oNxibelelayo ongumatshini wokuFakela iNqanaba lokuFakela iBhotile yokuNjikela
Ingumatshini wokuleyibhile osebenza ngokuzenzekelayo olungele iibhotile ezijikelezileyo, iibhotile ezisicaba, iibhotile zesikwere, iibhotile ezigobileyo, iikomityi kunye nezinye iimveliso zokutya kunye nesiselo, unyango, imichiza yemihla ngemihla kunye namanye amashishini okukhanya.
Umbane (v): 220v AC
Isantya sokuvelisa (b/min): 150—300
Uluhlu lwedayamitha yebhotile esebenzayo (mm): Φ38—Φ120
Ubude belebhile esebenzayo (mm): 30~220
Ubukhulu beleyibhile esebenzayo (mm): 0.03~0.13
ityhubhu yephepha esebenzayo i-diameter yangaphakathi (mm): 5"~10" ilungelelaniswa ngokukhululekileyo
Imilinganiselo (mm): 2100L * 900W * 2000H
Ubunzima (kg): 300
Bonke oomatshini bethu bokuleyibheli bomkhono bakwimo ye-double-drive.Umahluko kwabanye abavelisi kukuba abanye abavelisi basebenzisa kuphela ifom ye-double-drive ye-400P okanye ngaphezulu.Ukuhanjiswa okusemgangathweni kwe-double-drive kukhawuleza, kuzinzile kwaye kuchaneke ngakumbi.
Ulwakhiwo lwebrashi yomatshini wokuleyibhela imikhono yinkxaso yeengongoma ezimbini.Umahluko ovela kwabanye abavelisi kukuba abanye abavelisi basebenzisa inkxaso ye-single-point, kwaye inkxaso ye-double point izinzile.Ngethuba lokusetyenziswa kwenkxaso yenqaku elilodwa, ilebula yokugoqa iya kuphuka.
Umatshini wokuleyibhela umkhono usebenzisa izinto ezaneleyo, ukuhlolwa komgangatho ongqongqo, zonke izilungiso zombane zithunyelwa ngaphandle, kwaye iinkcukacha ziphathwa endaweni.
Ukuhanjiswa kwe-synchronous mechanism, nayiphi na indawo yokutshintshwa kwebhanti ingagqitywa ngokukhawuleza, xa kuthelekiswa nohlobo lwengalo yesiqhelo ye-multi-layer link (ukutshintshwa kunye nokugcinwa kufuna iiyure ezingaphezu kwesithandathu), ukugcinwa kulula, ukugcinwa kulula, kwaye akuyi kuchaphazela imveliso.
Uyilo olunengqiqo lwesihlalo sokusika, esilungele izikhongozeli ze-Φ30mm~Φ130mm, isihlalo sokusika sikhululekile ngokupheleleyo ekutshintsheni kunye nohlengahlengiso.
Ileyibhile yoyilo lwetreyi eshwabeneyo enye, ubude obuphakathi, kulula ukuyifaka iilebhile;ukubala okuzenzekelayo kwe-microcomputer, akukho mfuneko yokuseta, akukho luhlengahlengiso, nje ukuba ucinezela iqhosha, ileyibhile inokufunyanwa ngokuzenzekelayo, ibekwe ngokuzenzekelayo, kwaye utshintsho lweleyibhile lukhawuleza ngokupheleleyo kwaye lugcina umsebenzi, indawo yokusika ichaneke ngokupheleleyo.
Ileyibhile indlela yokondla: Ileyibhile yolawulo loxinzelelo lwe-synchronous, umthamo wokubonelela nge-180m/min, itreyi yokubonelela ngeleyibhile (500mm), i-diameter yangaphakathi yetyhubhu yephepha 4′, 8′, 10′, uyilo lwendlela yoxinzelelo oluzinzileyo lokutya kwelebhile kuqinisekisa ukusika. ukuchaneka kobude bethagethi, unikezelo luzinzile kwaye lukhawuleza, kwaye ukuchaneka kokunikezelwa kunye nokudubula kwethagethi kuqinisekiswa.
Uyilo olutsha lokusika luqhutywa yi-servo motor, enesantya esiphezulu, isenzo esizinzileyo nesichanekileyo, ukusikwa kweflethi, kunye nokushwabana okuhle.Ngomatshini wokumisa weleyibhile ngongqamaniso, ukuchaneka kokubekwa ngokusikeka kuphezulu njenge ±1mm.Cofa iqhosha lokumisa likaxakeka, kwaye iqhosha lokumisa likaxakeka lingafakwa kwindawo efanelekileyo kumgca wokuvelisa, ukwenzela ukuba imveliso ye-intanethi ikhuselekile kwaye imveliso ihambe kakuhle.
Ngaphambili: Umatshini wokuSila iPowder Pulverizer yoMshini
Okulandelayo: Inqaba yokupholisa kunye ne-Oli yokupholisa Uhlobo lwe-Screw Chiller
Umatshini wokuLeyibhela ngokuzenzekela kwiibhotile zeFlat Sti...
Umatshini wokuLayibhela ngokuzenzekela kwi-Boo eJikele kwisikwere...
I-Tin ye-Capping kunye nomatshini wokutywina / i-Tin Can F...
Umatshini wokuLayibhela wePhepha weTube yeComposite Can